arduino 수질 센서
Arduino yakavhurika-sosi yemagetsi puratifomu inosanganisa ese akavhurwa sosi software uye Hardware kuti vanhu vaite zvirongwa zvekudyidzana nyore. Unogona kuwana Arduino-inoenderana single board yemakomputa uye vashandise ivo kuita chimwe chinhu chinobatsira.
Mukuwedzera kune iyo hardware, iwe zvakare unofanirwa kuziva iyo Mutauro weArduino kushandisa iyo Arduino IDE kunyatsogadzira chinhu.
Iwe unogona kunyora uchishandisa webhu edhita kana kushandisa Arduino IDE isina kubatika. Nekudaro, iwe unogona kugara uchireva kune official zviwanikwa inowanikwa kuti udzidze nezveArduino.
Tichifunga kuti iwe unoziva zvakakosha, ini ndichave ndichitaura nezve zvimwe zvakanaka (kana zvinonakidza) zvirongwa zveArduino. Iwe unogona kuedza kuzvigadzirira ivo kana kuzvishandura kuti vauye nechimwe chinhu chako.
Inonakidza Arduino purojekiti mazano evatambi, nyanzvi, munhu wese
Iyo inotevera mapurojekiti inoda akasiyana ekuwedzera Hardware - saka ita chokwadi chekutarisa iyo yepamutemo link kune mapurojekiti (yakatanga kuratidzwa pane mukuru Arduino Project Hub) kudzidza zvakawanda nezvavo.
Zvakare, zvakakosha kutarisa kuti ivo havasi kunyanya mune chero chinzvimbo chinzvimbo - saka inzwa wakasununguka kuedza zvinonzwika zvakanaka kwauri.
1. ISD Controller
Kutsvaga mapurojekiti akare Arduino? Heano imwe yako.
Imwe yemapurojekiti akareruka ayo anorega iwe udzore marambi eUS. Hongu, iwe haufanirwe kusarudza kune anodhura zvigadzirwa zve LED kungoishongedza mukamuri rako (kana chero imwe yekushandisa-kesi), unogona kungoita anogadzirisa LED wozvigadzirisa kuti uishandise zvisinei nekuti iwe unoda.
Zvinoda kushandisa iyo Arduino UNO bhodhi uye zvimwe zvinhu zvakawandisa (izvo zvinosanganisirawo foni yeAndrew). Iwe unogona kudzidza zvakawanda nezvazvo mukati mekubatanidza kune projekiti iri pazasi.
2. Kupisa Glue LED Matrix Lamp
Imwe Arduino LED chirongwa chako. Sezvo isu tiri kutaura nezve kushandisa maODS kushongedza, iwe unogonawo kugadzira mwenje we LED inotaridzika zvakanaka.
Kune izvi, iwe ungade kuve nechokwadi kuti iwe une 3D printer. Tevere, iwe unoda tambo ye LED uye Arduino Nano R3 sezvinhu zvekutanga.
Paunenge uchinge wadhindisa nyaya uye kuunganidza chikamu chemwenje, zvese zvaunoda kuti uite ndeyekuwedzera glue zvimiti uye kuona wiring. Izvo zvinonzwika zviri nyore kwazvo kutaura - unogona kudzidza zvakawanda nezvazvo pane iri yepamutemo Arduino chirongwa chesaiti.
LED Matrix Mwenje
3. Arduino Mega Chess
Unoda kuve neyako yedhijitari chessboard? Kuregererei?
Iwe uchazoda TFT LCD inobata skrini yekuratidzira uye an Arduino Mega 2560 bhodhi sezvinhu zvekutanga. Kana iwe uine 3D printer, unogona kugadzira yakajeka kesi mairi uye shandura zvinoenderana.
Tarisa uone yepurojekiti yekutanga kukurudzira.
4. Zvaringana Tatova: Tambisa TV yangu
Basa rinonakidza kwazvo. Ini handidi kupokana nekubatsira kwayo - asi kana iwe uchitsamwiswa nevamwe vanozivikanwa (kana vanhu) paTV, unogona kungoisa izwi ravo pese pavanenge voda kutaura chimwe chinhu paTV.
Nehunyanzvi, iyo yakaedzwa neyekare tech shure panguva iyoyo (apo iwe wanga usina kunyatso fambisa chinhu). Unogona kutarisa vhidhiyo iri pamusoro apa kuti uwane pfungwa uye edza kuidzokorodza kana kungoisa musoro kune iyo link kuti uverenge zvimwe pamusoro payo.
Nyorosa TV Yangu
5. Robhoti Arm ine Controller
Kana iwe uchida kuita chimwe chinhu nerubatsiro rwe robhoti yako uye uchine simba rekutonga pamusoro payo, ruoko rwe robhoti ine controller ndeimwe yemabasa anobatsira eArduino. Inoshandisa iyo Arduino UNO bhodhi kana uri kushamisika.
Iwe uchave uine ruoko rwe robhoti -kuti iwe unogona kuita nyaya uchishandisa iyo Printer 3D kukwidziridza mashandisiro ayo uye iwe unogona kuishandisa kune akasiyana-siyana ekushandisa-emakesi. Semuenzaniso, kuchenesa peturu uchishandisa ruoko rwe robhoti kana chero chinhu chakafanana pausingade kupindira zvakananga.
Robotic Arm Ine Anodzora
6. Gadzira Musical Chiridzwa Uchishandisa Arduino
Ndakaona mhanzi dzakasiyana siyana dzakagadzirwa uchishandisa Arduino. Iwe unogona kuongorora Internet kana iwe uchida chimwe chinhu chakasiyana pane ichi.
Iwe unoda a Pe kupa flick mutero uye Arduino ONE kuti zviitike. Ichokwadi chirongwa chinotonhorera cheArduino paunosvika pakungopusha uye mafungu ako emaoko achashandurwa kuve mimhanzi. Zvakare, hazvina kuoma kugadzira izvi - saka iwe unofanirwa kuve nekunakidzwa kwekugadzira iyi.
Rwiyo rweMumhanzi uchishandisa Arduino
7. Pet Mudzidzisi: Iyo MuttMentor
Iyo Arduino-based kifaa inobatsira iwe kubatsira kubatsira kudzidzisa mhuka yako - inonzwika kunakidza!
Kune izvi, ivo vari kushandisa Arduino Nano 33 BLE Sense uchishandisa TensorFlow kudzidzisa diki neural network kune zvese zvakajairwa zvinoitwa peturu yako. Saizvozvo, iyo buzzer ichapa inosimbisa ziviso kana chipfuyo chako chiteerera murayiro wako.
Izvi zvinogona kuva nezvakawanda kushandiswa kana uchidhonzwa sekuenderana nezvaunoda. Tarisa uone iwo pazasi pazasi.
8. Basic Earthquake Detector
Kazhinji, unovimba nevashandi vehurumende kuzivisa / kuzivisa nezve kudengenyeka kwenyika (kana yambiro yacho).
Asi nemabhodhi eArduino, iwe unogona kungo kuvaka yekutanga kudengenyeka kwekuvhundutsa uye wozvivhenekera mhedzisiro iwe pachako pasina maringe neane masimba. Dzvanya pane bhatani riri pazasi kuti uzive nezve yakakodzera ruzivo kuti ubatsire kuzviita.
Yekutanga Earthquake Detector
9. Kuchengetedzwa Kuwana Uchishandisa RFID Reader
Sokutsanangura kunoita chirongwa ichi - "RFID tagging ndeyako ID sisitimu iyo inoshandisa diki redhiyo frequency kuzivikanwa ".
Nekudaro, muchirongwa ichi, iwe unenge uchigadzira RFID muverengi uchishandisa Arduino apa uchichinjika ne Adafruit NFC kadhi yekuwana kuchengetedzeka. Tarisa uone zvizere ruzivo uchishandisa bhatani riri pazasi uye ndiudze ini kuti rinoshanda sei kwauri.
Chengetedzo Kuwanikwa uchishandisa RFID muverengi
10. Kuputa Utsi uchishandisa MQ-2 Gasi Sensor
Izvi zvinogona kuve chimwe chezvakanakisa zveArduino zvirongwa kunze uko. Iwe haufanire kushandisa mari yakawanda kuti ushongedze utsi hwekutsvaira imba yako, unogona kubata nemhinduro yeDIY kune imwe nhanho.
Ehezve, kunze kwekunge iwe uchida kutadza kwakaoma kuiswa pamwe chete neutsi hwako hwetsi, mhinduro isingadhuri inofanirwa kuita hunyengeri. Pakati pezvose zviri zviviri, iwe unogona zvakare kuwana zvimwe zvinoshandiswa zvekuputa utsi.
11. Arduino Kubva kuAmazon Echo uchishandisa 1Sheeld
Kana wanga usingazive 1Sheeld chaizvo inotsiva kudiwa kweanowedzera-paArduino bhodhi. Iwe unongoda iyo smartphone uye wedzera Arduino nhoo kwaari kuti iwe ugone kuita zvinhu zvakawanda nayo.
Kushandisa zvishanu zvakadaro, wekutanga muvaki weprojekiti iyi akazviitira DIY Amazon Echo. Iwe unogona kuwana ese akakodzera ruzivo, schematics, uye kodhi kuti zviitike.
DIY Amazon Echo
12. Audio Spectrum Kuona
Ingoda kuitisa chimwe chinhu chinonakidza? Zvakanaka, heino zano kune yeodhiyo inotarisisa visualizer.
Nezveizvi, iwe uchazoda Arduino Nano R3 uye inoratidzwa ne LED sezvinhu zvekutanga zvekutanga nazvo. Iwe unogona kuendesa kuratidzira sezviri kudikanwa. Unogona kuibatanidza neinoburitsa musoro wako kana kungoita mutserendende kunze.
Zvinyore imwe yemapuro aripasi Arduino ayo aunogona kuedza kuti unakidze.
Audio Spectrum Kuona
13. Motion Inotevera Inotya Kamera
Kukwira kunetsa? Kana iwe uri - ichi chichava chimwe chinotonhora Arduino Projects mune yedu runyorwa.
Chaizvoizvo, izvi zvinorehwa kutsiva kamera yako yekuchengetedza iyo inogumira pakona yevhidhiyo kurekodha. Iwe unogona kushandura kamera yakafanana kuita motorized kamera inotevera kufamba.
Nekudaro, pese painenge ichitsvaga kufamba, ichachinja kona yayo kuyedza kutevera chinhu. Iwe unogona kuverenga zvakawanda nezvazvo kuti uwane maitiro ekuigadzira.
Motion Inotevera Inotya Kamera
14. YeMhando Yemhando Yekutarisa System
Kana iwe uine hanya nehutano hwako maererano nemvura yaunonwa, iwe unogona kuedza kugadzira izvi.
Izvo zvinoda Arduino UNO uye emhando yemvura sensors seyanyanya midziyo. Kuti uve akatendeseka, chirongwa chinobatsira Arduino chekuenda. Iwe unogona kuwana zvese zvaunoda kuti uite izvi mune iyi link pazasi.
Yemhando Yekutarisa Kwemhando
15. Punch Yakagadziriswa Arm Flamethrower
Ini ndingave ndakangwara zvakanyanya nezve izvi - asi zvakakomba, imwe yeakanakisa (uye inotonhorera) Arduino mapurojekiti andati ndambosangana nawo.
Ehe, izvi zvinoverengerwa kunge chirongwa chekunakidzwa kuti uedze kuti uone kuti ndeapi mapurojekiti akakura aunogona kubvisa uchishandisa Arduino uye ndepano pairi. Muchirongwa ichi, akatanga kushandisa iyo SparkFun Arduino Pro Mini 328 pamwe chete neyekusimudzira semidziyo yekutanga.
Punch Yakagadziriswa Flamethrower
16.Polar Drawing Machine
Iyi haisi chero yakajairika machira emuchina ungangodaro waona vanhu vachigadzira vachishandisa mabhodhi eArduino.
Naizvozvi, unogona kudhirowa mamwe anotonhorera mavhidhiyo mifananidzo kana bitmap. Zvinganzwika senge zvekunyanyisa kuuraya asi ipapo zvinogona zvakare kunakidzwa kuita chimwe chinhu seichi.
Ichi chinogona kunge chiri chirongwa chekunyepedzera, saka iwe unogona kutarisa kune izvo zviri pane icho chinongedzo kuti uzvipfuura kwazvo.
17. Home otomatiki
Nehunyanzvi, ichi chingori chirongwa chakakura cheprojekiti nekuti unogona kushandisa Arduino bhodhi kugadzirisa chero chaunoda kumba kwako.
Sezvandakambotaura, iwe unogona kuenda kune chekushandisa chekuchengetedza, pamwe kugadzira chimwe chinhu chinonzwisa mvura zvirimwa kana kungoita alarm alarm.
Zvisingaverengeki mikana yezvaunogona kuita kugadzirisa zvinhu kumba kwako. Kwekureva, ndakabatanidza kune inonakidza imba yekushandisa otomatiki pazasi.
Bhonasi: Robhoti Cat (OpenCat)
Iyo programmable robotic katsi yeAI-yakawedzerwa masevhisi uye STEM dzidzo. Muchirongwa ichi, mabhodhi eArduino neRaspberry Pi akashandiswa.
Iwe unogona zvakare kutarisa kune Raspberry Pi alternatives kana uchida. Iyi projekiti inoda basa rakawanda, saka iwe ungade kuisa mari yakawanda nguva kuti iite kuti ishande.
Nekubatsirwa kweArduino mabhodhi (pamwe chete nemamwe ma sensors uye zvigadzirwa), iwe unogona kuita akawanda mapurojekiti zviri nyore. Mamwe mapurojekiti andanyora pamusoro apa akakodzera kune vanotanga uye mamwe haana. Inzwa wakasununguka kutora yako nguva yekuongorora zvaunoda uye mutengo weprojekiti usati waenderera.
Ini ndakapotsa kunyora inonakidza Arduino chirongwa chakakodzera kutaurwa pano? Ndizivisei pfungwa dzenyu mune zvakataurwa.
Bata Iyo Mukuru Mipumburu Pamhepo uye nezvimwe muvhiki rino Xbox Deals neGoridhe
Bata Psychonauts 2 uye Star Wars muvhiki rino Xbox Deals neGoridhe
Google Home matipi uye manomano: Tenzi wako Nest Mini, Max, Audio, Hub uye Hub Max
12 Single Board Computers: Mamwe mavara kumapropberry Pi